Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola lebhola lesiNgisi I-Ashley Barnes Ingane Yendaba Yobuntwana I-Untold Biography Amaqiniso
I-LB iveza Indaba Egcwele Yomdlalo Webhola okwaziwa ngegama elithi “Genius”Barney“. Indaba yethu ye-Ashley Barnes Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
I-Ashley Barnes Ingane Yendaba Yobuntwana - Ukuhlaziywa Kuze Kube Manje. Credits to BBC futhi I-DailyMail
Ukuhlaziywa kuhilela impilo yakhe esemncane, isizinda somndeni, impilo yomsebenzi wasemncane, indlela eya endabeni yodumo, ukukhuphuka emlandweni wodumo, ubudlelwano, impilo yomuntu siqu, indlela yakhe yokuphila, impilo yomndeni kanye namaqiniso angenakuphikwa.
Yebo, wonke umuntu ubona uBarnes njengalowo umgadli owenze idumela elibi lokukhulisa abaphikisi nokushaya amagoli amakhulu. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-Biology ka-Ashley Barnes okuyinto ethakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokunye, ake siqale.
Ama-Ashley Barnes Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Wonke umuntu umazi njengo-Ashley Barnes EMABI amagama akhe aphelele ngu-Ashley Luke Barnes. UBarnes wazalwa ngosuku lwe-30th ngo-Okthoba 1989 edolobheni laseBath, e-United Kingdom. Wazalelwa kubazali abangamaNgisi abanezimpande ezingezona ezaseBrithani. UBarnes unomndeni wakhe ovela e-Austria. Uthi bewazi?… Ugogo wakhe ubaba wakhe uvela eKlagenfurt, idolobha eliseNingizimu ye-Austria.
U-Ashley Barnes wakhulela eBath, idolobha elikhulu eNgilandi elaziwa ngezindawo zalo zokugezela ezakhiwe ngamaRoma nezindawo ezinhle zakudala zaseRoma. Lokhu kungachaza isizathu esenza ukuthi ugogo kayise ka-Ashley Barnes ashiye izwe lakubo e-Austria ayohlala edolobheni lesiNgisi.
U-Ashley Barnes uduma eBath- A City e-England. Isikweletu ku-LuxuryTraveladvisor ne-WordAtlas
Imibiko yempilo yokuqala yase-Ashley Barnes isikisela ukuthi akakhuliswanga kwimvelaphi yomndeni osezingeni eliphakathi. Wayengenasifiso sokubona izinto zakudala, ibhola lezinyawo nje. Abazali baka-Ashley Barnes babefana nemindeni eminingi eBath ekwazile nika amaqoqo amasha wamathoyizi endodana yawo, kufaka nebhola.
Ama-Ashley Barnes Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Ukuba nomzali othanda ibhola, bekungokwemvelo nje ukuthi uBarnes athandane nalo mdlalo omnandi. Lokhu kufaka nokuthi aphuphe ngokuba ngumdlali webhola lezinyawo.
U-Ashley Barnes ukubamba iqhaza kokuqala kwebhola wafika ngesikhathi semfundo yakhe yamabanga aphansi. Ngaleso sikhathi, abazali bakhe bambhalisa e-Writhlington School etholakala edolobhaneni laseDunkerton ngaseBath, eNgilandi. Esikoleni, u-Ashley wafuna isasasa lokudlala ibhola lokuncintisana.
I-Ashley Barnes Yezemfundo kanye Nokwakha Komsebenzi. Ikhredithi kuGoogleMaps
Kude nesikole, uBarnes uqhubeke nokudlala ibhola ngokuzethemba, enza umkhuba wokuphimisa umaki wakhe nokwenza izinto ngaphandle kokuluhlaza okwesibhakabhaka ngebhola lebhola. Lokhu ukwenzile ukumangala kwabangane bakhe namalungu omndeni.
U-Ashley Barnes wayehlose ukukhula njengomntwana futhi ukuzimisela kwakhe ukuba ngumdlali webhola lezinyawo kwakungeyona nje inganekwane. Ngokuzibeka emsebenzini, wanquma ukuya eChilwood Drive esendaweni yaseSomerset County ukuyothamela izivivinyo zebhola neBath Arsenal Juniors.
Ama-Ashley Barnes Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ngenkathi esemncane, uBarnes wazibona edlula Izilingo zeBat Arsenal Juniors zezemfundo futhi zabhalisa ngempumelelo kwi-kilabhu. I-Bath Arsenal Juniors Ibhola, yize ingahlangene ne-Gunners yiklabhu yebhola enamaqembu wezingane zabo bonke ubudala bentsha.
Ngenkathi ekilabhu iBath Arsenal, u-Ashley Barnes wahlangana nozakwabo ayesebenza naye uScott Sinclair naye owaphenduka ubuchwepheshe. Ngokubambisana, bobabili laba bafana baba nezikhathi zabo ezinhle ngaphambi kokuba uSinclair ashiye ukujoyina iBristol Rovers eneminyaka eyisishiyagalolunye.
U-Ashley Barnes Ukuphila Kwasekuseni noBhati Arsenal. Isikweletu ku-IG
Kusenesikhathi, konke u-Ashley wayefuna ukufinyelela esicongweni sebhola lamaNgisi. Ngamazwi akhe:
“Zonke izinsuku lapho ngivuka, kwakumelwe ngizithinte. Iphupho lokuba ngu-pro lalimangalisa futhi laliphupha nsuku zonke lapho ngisemncane. ”
Ama-Ashley Barnes Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela Igama
U-Ashley Barnes waqala umsebenzi wakhe ophakeme njengomgcini wamagoli amaningi nePaulton Rovers, iklabhu yasendaweni etholakala ku-English Southern League. UJesses uBesses ofanekiselwe ngezansi ubekwelinye lamaligi aphansi ku-English Soccer League System.
U-Ashley Barnes Ukuphila Kwasekuqaleni Ngebhola Elikhulu. Isikweletu ku-BBC naku-Dave Rowntree
U-Ashley Barnes wakalwa kakhulu phakathi neminyaka yakhe yobusha esemncane. Uqale ukuthola izipesheli ezinhle kakhulu kumakilabhu amakhulu kwiligi ephezulu ye-England. Lokhu kufake uphawu kohambo lwakhe kusuka eSouthern League kuya phezulu ku-English League System- The Premier League.
Ashley Barnes wafunda kanzima ngezikhala zemalimboleko e-Oxford United, Salisbury City, East Eastne Borough, Torquay United naseBrighton Hove Albion. Ngasinye salezi zipelingi zemalimboleko zazimakwe sinesikhathi esilinganiselwe sokujabulisa abaphathi bakhe. Uthi bewazi?… Uphumelele futhi wadabula ingxenye ephansi yohlelo lwama-English League nge-Loan spell to the top all in the name for to be a first-players hit.
Ama-Ashley Barnes Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Kumlando Wendaba
U-Ashley Barnes wakuthola akufunayo, lelo phupho lokuba ngumgadli ozikhethela kuqala ikilabhu elizomnika isivumelwano saphakade. Konke kwenzeka ngempela ngesizini ye-2011-12 lapho asiza uBrighton ukuthi abuyele emqhudelwaneni weChannel Championship njengoba eshaye amagoli ahamba phambili ngamagoli we-14 kuyo yonke imiqhudelwano.
Ngo-10 uJanuwari 2014, ukusebenza kukaBarnes kumbone ethathwa yi-Burnley ngemali engadalulwanga. Eminyakeni emine nje, ngqo kwi-3rd kaMashi 2018, wazibhalela yena ezincwadini zomlando wekilabhu lapho eba ngumgadli ophambili weqembu ku-EPL selokhu lasungulwa e1992. Njengasikhathi sokubhala, uBarnes uzitholele idumela eliqhakaza lokuqhakambisa abaphikisi abakhulu noma abancane emigomweni yakhe.
U-Ashley Barnes egubha eyodwa yezinhloso zakhe.Credit to UNdunankuluLeague
Yize kungenzeka ukuthi akekho ezingeni USergio Aguero, kodwa kubalandeli beBurney, tuzikhumbuza ngenombolo eyigugu 10 izohlala ikhunjulwa. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Ama-Ashley Barnes Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Ngemuva komsunguli webhola ophumelelayo waseNgilandi, kunentombazane ebabazekayo egama linguZan Barnes ongaziwa kangako ngaye. Bobabili uBarnes noZan bashadile futhi bebe ndawonye isikhathi eside. Ndawonye, ​​banendodana egama linguFlynn eyazalelwa e2011.
Hlangana no-Ashley Barnes Ingane- Flynn Barnes
Kungenzeka ukuthi uFlynn wayeseminyakeni engu-2 ngaleso sikhathi egqoka lelo jezi likaBrighton kanye ne8 njengangesikhathi sokubhala le ndatshana.
Ama-Ashley Barnes Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi impilo yomuntu ka-Ashley Barnes kungakusiza uthole isithombe esiphelele ngaye. Izikhathi wasenza saqonda ukuthi uBarnes ungumuntu ophansi emhlabeni onomusa kakhulu kubadlali abasebenza nabo. U-Ash-Cabs, njengoba ebizwa ngegama lokuthi ungumthwali wabantu nomholi othola injabulo ngokusiza abasebenza naye ngokuhamba.
Akuyona indawo ejwayelekile yePremier League ukubona umdlali webhola eliphezulu njengoBarnes enza umsebenzi we-cab. UBarnes kodwa, uvame ukungena epaki yezimoto iBurnley enkundleni yezokuzilolonga nabanye abaqeqeshi beqembu lakhe ebhasini lakhe. Nayi i-akhawuntari yendaba ngumuntu othanda;
Lapho iminyango yabagibeli isheleleka ngaphesheya, ngabona abagibeli bebhola abayisikhombisa beqhamuka, ngamunye ngamunye. Lapho-ke umnyango womshayeli uyavula futhi uphume uthola u-Ashley Barnes, umgadli wabo ophambili kanye nomshayeli oqokiwe.
Ekuqaleni, uBarnes washayela imoto ehlakaniphile, kodwa ngokuhamba kwesikhathi yathuthukela kubhasikidi njengoba kuboniswe ngezansi. Lokhu wakwenza ngenxa yabalingani beqembu lakhe.
Ama-Ashley Barnes LifeStyle Amaqiniso. Isikweletu ku-AutoEvolution
Lesi yisizathu esenza ukuthi umholi ongokomoya weBurnley FC abizwe futhi ngokuthi "Ama-Ash-Cabs”. Abathandi bebhola e-Burnley bahlangana endaweni eqoqayo eCheshire ekuseni kakhulu ngaphambi kokufika kukaputeni wabo noNo10 bezolanda.
Ama-Ashley Barnes Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
AmaBarnes anamalungu omndeni ahlala ikakhulukazi eBrithani nase-Austria. Ngenkathi wonke umuntu elindele ukuthi umndeni wakhe oseduze wonke ungabalandeli bakaBurnley, akunjalo. Indodana ka-Ashley Barnes uFlynn ungumlandeli omkhulu weMan City.
Umgadli waseBurnley u-Ashley Barnes wake wathi wathenjiswa ukuthi uzosikhuthaza UJurgen Klopp NgeSMS uthola amaphuzu abhekene neManchester City ngaleyo ndlela esaphaza amathemba abo enhloko.
Uthi bewazi?… UFlynn akazange ajabule lapho ezwa lokho. "Yathi kimi, 'Woza baba, ungathathi izinto ngobunzima !!.' Ngathi kuye… 'Uxolo ndodana, kufanele ngenze umsebenzi wami.'
Ngokujabulisayo, uBarnes akenzanga lutho oludambisa isicoco seligi sikaNdunankulu e-Liverpool. Uma enza kanjalo, ubezoba nomfana oyedwa ongajabule kakhulu omlindile ukuthi abuye ekhaya ezoxhaxha.
Ama-Ashley Barnes Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - LifeStyle
Okomuntu owake washayela imoto eyi-Smart ukuqeqeshwa nsuku zonke, kepha ekuthuthukisile lokho ukuya kubuncane, kulula ukuqagela ukuthi uBarnes uphila impilo elula. In izwe lesimanje lebhola lezimoto ezihlukile nokufakwa kwezindaba zokuxhumana, iBarnes nje Ngolo Kante siyindlela yokuqabula.
Ama-Ashley Barnes LifeStyle Amaqiniso. Isikweletu ku-AutoEvolution. Isikweletu ku-Auto Evolution futhi Izikhathi
NjengaseMashi 2018, umgadli wayethola amaholo we-2.4 Million Euro (2.0 Million Pound) ngonyaka. Ukuqongelela lokho ekuzuzeni ngesikhathi, kusho ukuthi u-Ashley Barnes uhola u- $ 5,632 ngosuku kanye ne- £ 235 ngehora, i- £ 3.91 ngomzuzu ne- £ 0.07 ngemizuzwana. Yize ethola okuningi, uBarnes usenkolweni ngokuphatha imali yakhe.
Ama-Ashley Barnes Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
NGABHUKWA IBHEMA NGOKUKHANGELA E-PITCH: Lo mcimbi wenzeke ngomhla ka-13th ka-Ephreli, 2019. Kwakuwusuku u-Ashley Barnes abhukwa ngalo kulokho abalandeli bebhola abakubiza ngokuthi “izimo ezinzima kunazo zonke“. Bona akwenze ngezansi.
I-Ashley Barnes Untold Amaqiniso- Ama-Unor Orthodox Bookings. Isikweletu ku-SportsBible. Ikhredithi ku- I-SportsBible
Uthi bewazi?… He ibibhukelwe ngunompempe wokuqabula umvikeli ogama lakhe linguJoe Bennett ngesikhathi somdlalo bebhekene neCardiff City. Bobabili abadlali kwaba nokushayisana ngesikhathi sokumisa isigamu sokuqala esacishe saholela ekulweni. Esikhundleni sokuphakamisa ikhanda libheke kuBennett, uBarnes wanquma ukukhombisa uthando ngokumqabula.
UKUFUNDA ISITSI: Ku-9 Mashi 2013, uBarnes uthole ikhadi elibomvu ngesikhathi sokumiswa ngokumelene neBolton kulokho okwabhekwa njengokuphikisana okumangazayo. Ubenemizamo ephumelelayo yokwakha unompempe womdlalo.
U-Ashley Barnes wabhukha i-Refere. Isikweletu kuDailyMail
Lokhu kuthathwe njengecala elikhulu yi-English FA eyamnikeza umdlalo onqunyelwe imidlalo eyisikhombisa. Kuthokozise abalandeli bakhe, uBarnes ubuyile ekuvinjelweni kwe-20 Ephreli eshaya amagoli amabili kwi-6-1 enqoba iBlackpool. Wayeqanjwe igama lomlisa.
UMVIKELI OQHAWULEKILE UZE WAFUMANELE OKUFANELE: Akuyena omunye umuntu ngaphandle Virgil van Dijk, yikho kodwa umvikeli oyedwa athi ubelokhu engawanaki wonke amaqhinga akhe.
U-Ashley Barnes ubona uVirgil van Dijk njengomvikeli weToughest ake wabhekana nakho. Isikweletu ku-BurnleyExpress
Ngamazwi akhe: “UVirgil van Dijk nguyena onamandla kunabo bonke engake ngamelana nabo emsebenzini wami. Uyena kuphela engingakawutholi umkhawulo okwamanje. Uyindlela yokuqina namandla. I-Virgil ingumshini, ”Kusho uBarnes.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Ashley Barnes Childhood Indaba yethu kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.